Fiara fiara madrid of madrid - fiara fitaterana Fiara fiara madrid of madrid - fiara fitaterana
Sticky Post By Fampiofanana mpampiofana Posted in Fanofana fiara Permalink
Toeram-piofanana bus an'ny madrid
Mila mandehandeha ny vahiny amin'ny hetsika misy anao ve ianao, manangona any amin'ny faritra rehetra amin'ny morontsirak'i Madrid miaraka amin'ny fiarovana sy ny fahatokisana? Manitsy ny zavatra ilaintsika isika ary manampy anareo hisafidy izay mety indrindra. Ny orinasam-piarahamonin'ny fiara fitaterana ao Madrid dia mamela azy ireo handamina ny dianao, ho azy manokana na raharaham-barotra, miaraka amin'ny fisintonana any amin'ny seranam-piaramanidina na amin'ny toerana hafa.
Tianao ny hahalala hoe aiza no misy ny orinasan'ny fiara fitaterana sy ny minibus; Torresbus. Isika, araka ny voalaza etsy ambany ao amin'ny sari-tany; Mipetraka eo amin'ny mpanorina ny arabe izahay; avy any amin'ny faritra Getafe, Madrid. Fa, ho setrin'izany, manana ny biraonay izahay, any amin'ny faritr'i Toledo.
Noho izany, manolotra fitsangantsanganana tsara indrindra izahay ao amin'ny faritra Madrid sy ny faritr'i Toledo. Ary ahoana, tsy ho latsa-danja izany, any amin'ny faritra hafa ao Espaina.
Te-hanofa mora vidy ve ianao?
Mitady orinasa fiantohana fiara fitateram-bidy izay tena sarobidy ianao, miaraka amin'ny vidiny tsara sy ny kalitao avo indrindra. Noho izany, manome sy manome ny mpanjifa ny kalitao tsara indrindra isika, ny vidiny tsara indrindra ary noho izany dia manana ny mpamily tsara indrindra isika.
Raha te-handamina sy hanofana fiara madinidinika ianao, ataovy izany miaraka aminay; Torresbus. Ny orinasanao fahatokisana.
Antsoy izahay amin'ny telefaonina isa + 34 607 372 252 ary mangataka ny teti-bola maimaim-poana tanteraka miaraka aminay, na raha tianao, dia afaka manoratra any amin'ny e-mail info@torresbus.es, mandefa ny vaovao rehetra ho an'ny diany.
Satria manohitra ireo orinasan-dàlana hafa ao Madrid izahay.
Torresbus, orinasanao fitokisana, ho an'ny hofaina minibus sy minibus.
Azonao atao ny mandray anao amin'izay tianao.
Toeram-piofanana bus an'ny madrid Desambra 5th, 2016Fampiofanana mpampiofana